Daawo: Madaxweyne Deni oo furay Kalfadhigga 48-aad ee Baarlamaanka Puntland – MIDNIMONEWS
Daawo: Madaxweyne Deni oo furay Kalfadhigga 48-aad ee Baarlamaanka Puntland
Talaado June 15, 2021 (MN) : Madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa hadlay xaalada Dekedda Boosaaso iyo halka uu ka dambeeyay heshiis balaarin Dekedda ee ay Puntland la gashay Shirkadda P&O.
Madaxweyne Deni oo ka hadlay furitaanka Kalfadhigga 48-aad ee Golaha Wakiillada Puntland ayaa sheegay inuu joojiyay dhaqaale si gaar ah ugu dhici jiray Shirkadda P&O oo mataano la ah Shirkadda DP World, taas oo soo dadajisay in la furo wada hadal dib loogu eegayo heshiiskii shirkaddu kula wareegtay Dekedda ee dhacay 2017, kaas oo dhowaan soo dhamaaneysa.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa xusay in 20 – 22 bishan ay soo gaarayaan Dekedda Boosaaso xafaarado lagu furayo marinada Gaadiidka soo galaya Dekedda oo Ciid fariisatay. Waxaana uu intaas ku daray inuu rajeynayo in labo bilood gudahood uu ku bilowdo mashruuca dayactirka iyo balaarinta Dekedda magaaladda Boosaaso.
“Waxaa 20 – 22 bishan soo gaaraya Dekedda Boosaaso xafaarado lagu furayo marinada Dekedda oo Ciid fariisatay, sidoo kale waxaan rajeynayaa in 2 bilood gudahood lagu bilaabo shaqooyinka kale dayactirka Dekedda Boosaaso.” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Ugu dambeyntii, Madaxweynaha Puntland Dr. Siciid C/llaahi Deni, ayaa sheegay in hadii uu bilowdo Mashruuca dib u dhiska Dekedda Boosaaso, ay xoog saarayaan Arrimaha waddooyinka si loo hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha Puntland.
Previous Maxkamadda ku taalla Masar oo xukuntay 12 qof dil toogasho ah
Next Bayle Oo Norway Waydiistay in Ay Ka Caawinaan Dhaqaalaha Doorashooyinka
11 hours ago Mmmusse
Waqtiga Ay Ka Dhaceyso Doorashada Guddoonka Guddiga Somaliland Oo La Shaaciyay
15 hours ago Mmmusse
Hirshabeelle Oo Magacaawday Guddiga Doorashada Aqalka Sare
Puntland Oo Kala Qaaday Maleeshiyo Beeleed Uu Dhexmaray Dagaal
20 hours ago Mmmusse
Qoorqoor Oo Lagu Wado Inuu Soo Gudbiyo Liiska Musharaxiinta Aqalka Sare
Markabkii Booyadlaha Ee La Qafaashay Oo Goor Dhow La Sii Daayey